Wụnye APK Files na Android - The kacha ụzọ wụnye APK on Android
> Resource> Android> Ihe kacha ụzọ Wụnye .apk Files na Android
Dị ka ọrụ nke Android OS, ihe ndị mmadụ na dị ka ọtụtụ bụ na ọ na-enye ha ohere kpamkpam wụnye atọ ọzọ ngwa. Ị nwere ike ibudata ma wụnye ọ bụla ngwa si ​​ahịa. Ka ọ dịgodị, e nwekwara ọtụtụ ndị na-eme mkpesa na ha amaghị otú iji wụnye a ndị na-abụghị ahịa ngwa ha Android igwe ma ọ bụ mbadamba. Ọ bụrụ na ị na-achọ a ngwọta, ị nwere ike akwụsị ebe a. N'okpuru ebe a bụ ndị kacha ụzọ wụnye APK faịlụ na Android na otu Pịa.
Ihe niile ị chọrọ ime bụ nwere ihe dị mfe na-eji Android Manager: Wondershare MobileGo. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko atụgharị Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac).
Rịba ama: Na-esonụ ndu, ka na-arụ ọrụ na Wondershare MobileGo. The ụzọ wụnye .apk faịlụ gị Mac bụ fọrọ nke nta ahụ.
Wụnye APK faịlụ na Android na 1 click
Mgbe nbudata Wondershare MobileGo Android Manager, ị wụnye na-agba ya na kọmputa gị. N'otu oge ahụ, jikọọ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka usoro ihe omume na kọmputa na iji eriri USB ma ọ bụ site Wi-Fi. Wi-Fi bụ dị mgbe iji Windows version, sịnụ, Wondershare MobileGo.
Mgbe ahụ na-aga "égwu" na ekpe menu nke usoro ihe omume si interface. Ebe a niile gị arụnyere ngwa ọdịnala na gị gam akporo ngwaọrụ na-depụtara. N'ikpeazụ, pịa "Wụnye" ịhọrọ APK faịlụ na i zọpụta ma ọ bụ ebudatara na kọmputa gị. Ha ga-arụnyere otu otu na ekwentị gị na akpaghị aka.
Ọ bụ ya. Ugbu a, ị maara otú wụnye .apk faịlụ maka Android. Ọzọkwa, ị pụrụ mbupụ gị APK faịlụ gị Android azụ gị na kọmputa maka ndabere ma ọ bụ òkè. Họrọ ngwa (s) na pịa "Export", na mgbe ị na-azọpụta gị APK faịlụ na kọmputa gị ugbu a.
Ọ bụrụ na ị nwere mkpa, ị nwekwara ike iwepụ achọghị ngwa site gị Android na otu Pịa na "Uninstall". Nke a Android Njikwa faili na-abụghị nanị mma na ijikwa ngwa, kamakwa na-akwado na-ebufe kọntaktị gị, SMS, na ihe nile multimedia ọdịnaya. Ọ bụ ọnụ ahịa nke owning.
Play video mgbe ị chọrọ ịbụ doro anya banyere nzọụkwụ ngwa ngwa.
Gịnị Android oku Manager nwere ike ime ka Ị